Kedu ihe bụ GIS na gịnị bụ mkpa ya? | Netwọk Mgbasa Ozi
Teknụzụ agbanweela ozi dịnụ na ngalaba sayensị niile. Mgbe amụrụ sayensị kọmputa, a na-akpọ usoro ihe ọmụma setịpụrụ ngwaọrụ kọmputa nwere ike ịnye ozi gbasara ihe ọ bụla site na mmemme kọmputa. Otu n'ime sistemụ ihe ọmụma a nke nyeere aka inweta data site na mbara igwe bụ SIG. Nkọwa okwu a pụtara usoro ihe ọmụma gbasara ala ma ọ bụ ndị na-enye nnukwu data gbasara ohere.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe bụ njirimara GIS na mkpa ha nwere taa.
1 Kedu ihe bụ GIS
2 Usoro ihe omuma na ihe omuma
3 Mkpa ọdịdị ala dị na GIS
Kedu ihe bụ GIS
Ọ bụ sistemụ ihe ọmụma nke nwere ọtụtụ data na-arụ ọrụ site na ngwaọrụ kọmputa a maara dị ka ngwanrọ. Ihe a kapịrị ọnụ a na-amụ bụ oghere nkịtị ma n'ihi nke a ka a na-akpọ ya sistemụ ihe ọmụma ala ma ọ bụ GIS. Ọ bụ sọftụwia akọwapụtara nke na - enye ndị ọrụ niile ohere ịmekọrịta mmekọrịta chọrọ iji gosipụta usoro nke ozi ala nke na - ezo aka na mpaghara ụfọdụ. Nke a bụ otu site na ijikọ map nchekwa data ị nwere ike ịnwe nnukwu ozi gbasara oghere.
Typedị eserese a na-enyere aka iji anya nke uche hụ data niile enwetara site na ihe nlele iji tụgharịa uche na ịkọwapụta ihe omume ala niile nke ụdị ọ bụla. Nke ahụ bụ, anyị na-achọta GIS nke nwere nnukwu ozi dịka map okporo ụzọ, atụmatụ ubi, oke mmadụ, nkesa ahịhịa, ebe obibi nke ụfọdụ ụdị anụmanụ, wdg. Na ozi enwetara site na nlele Enwere ike iji map mee usoro ihe ngosi nke a ga-egosipụta data niile.
Nke ahụ bụ, anyị nwere ike ịnweta maapụ otu mpaghara a kapịrị ọnụ anyị chọrọ ịmụ ma tinye mgbakwunye nke ozi ala nke enwetara site na nlele. Ozugbo anyị gbakwunye oyi akwa ozi na map ala, anyị na-enweta usoro ihe ọmụma banyere ọdịdị ala. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịnwe ebe obibi nke otu ụdị na ụba ya site na ngwakọta n'etiti map ala na ngwugwu ozi.
GIS na-enye gị ohere ịjụ ajụjụ ma gosipụta nsonaazụ ya na gburugburu weebụ yana na ekwentị mkpanaaka n'ụzọ ọsọ na nghọta. N'ihi usoro ihe ọmụma ndị a, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nsogbu dị mgbagwoju anya nke na-esite na atụmatụ na njikwa nke ókèala ahụ nwere ike idozi. Mfe a nke enwere ike igosipụta ozi emeela ka sistemụ ihe ọmụma gbasara ala banye nkwado bara uru na mkpebi maka ọrụ dị iche iche.
Usoro ihe omuma na ihe omuma
Amaara taa na anyị na-eke ma na-echekwa ozi oge niile. Ozi a na-abawanye ma enwere ike ịsị na enweghị ike ịchekwa data a niile na ngwaọrụ dịka ọ dị na mbụ. Mụ mmadụ na-atụnye ụtụ na uto nke ozi, mana ọ bụghị naanị ha. N'etiti igwe ha na-ebute nkwukọrịta nke na-emepụta ọtụtụ data dị mkpa maka njikwa. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ihe ntanetị dijitalụ nke arụnyere na arịa iji chọpụta ụzọ ejirila n'oge nnyefe nke ngwugwu. Ezigara ndị ụlọ ọrụ na-ebugharị ozi a niile ka ebutere ndị ọrụ ụlọ ọrụ ha ụgwọ na ego ha ga-akwụ.
Otu ihe ahụ na-aga maka ozi gbasara ala. Ọdịdị nke ozi ọ nwere ike inyere anyị aka ịhụ ihe, ebe na ihe kpatara ihe dị iche iche na-eme na gburugburu ebe obibi anyị. N'ihi ọdịdị ala na geology anyị maara ọdịiche dị iche iche nke elu ụwa. Ọ bụrụ na anyị jikọtara ihe sayensị na-enye anyị na nghọta nke ihe nlele na data dị iche iche anyị nwere site na sistemụ ihe ọmụma, anyị mepụtara GIS.
A na-eme ihe nlele ndị ahụ n'ụzọ na-enweghị atụ ma na-enweghị atụ. Nke a pụtara na ejiri nwayọ nweta ozi rue mgbe ekpughere ozi ọhụrụ. Anyị ga-enye ihe atụ iji ghọta nke ọma ụdị nke ejiri iji nweta ihe ọmụma. Anyị chere na ịchọrọ ịmụ ụdị otu mgbada. Iji nweta ozi a, ị ga-ebu ụzọ rụọ ihe nlele. N'ime ihe nlele a, a ga-agụta ebe ndị a na-ahụ anya nke ụdị mgbada a na-ekwu na a ga-ahụkwa njikwa ala nke ebe a hụrụ ya.
Ntọala nke njikwa ala niile na-ekpebi n'ụzọ ziri ezi karị ebe mpaghara nkesa ụdị a. A na-echekwa set nke ozi a niile na ọkwa ozi. Mgbe e mesịrị, anyị na-agbakwunye ozi a na map ala anyị nwere nke mpaghara a kapịrị ọnụ. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere mpaghara ala niile site na nkesa ụdị mgbada na anyị nwere ike ịmata njirimara nke ebe obibi ya.
Mkpa ọdịdị ala dị na GIS
Ozugbo anyị nyochara ọnụọgụ nke ozi anyị nwere, anyị na-ahụ na data karịrị akarị iji rụọ. Sayensị na-akọwa ụwa anyị bi na ya ma nwekwuru ozi banyere ya. Nke a pụtara na anyị ga-achịkọta ihe ọmụma ahụ n'ụzọ ụfọdụ. Na GIS anyị na-ahụ ihe niile akọwapụtara nke na-enyere anyị aka inwe ike rụọ ọrụ nke ọma ma nyochaa ozi ala nke mpaghara.
Ozi ala a bụ ihe nwere oghere gbasara mbara igwe. Nke a nwekwara ike mastered dị ka a na ọnọdụ na attributor ọmụma na nkọwa ndị ọzọ ihe banyere ihe na ajụjụ. Ihe atụ ọzọ bụ ịkọwa nwoke n'okporo ámá dị ka ebe nhazi ohere.
Ojiji nke GIS emeela ka ọhụhụ nke data enwetara na maapụ dị ukwuu. Taa a na-eji GIS eme ihe maka ọrụ ọ bụla na maka ọchụchọ maka ọdịdị ala. Site na ụlọ ọrụ ụgbọ njem na nyocha mmetụta gburugburu ebe obibi, GIS abụrụla ngwa ọrụ dị mkpa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere GIS na mkpa ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » GIS (Usoro ihe omuma banyere ala)
Bulnes oroma osisi